ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်အတွက် ယူနိုက်တက်အသင်း၏ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းများနှင့် သတင်းထွက်နေသော ကစားသမားများ - Myanmar Globe
ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်သည် စနေနေ့ ဇန်နဝါရီ 1 ရက်၊ 2022 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ 31 ရက် တနင်္လာနေ့ 11 နာရီတွင် ပိတ်မည်ဖြစ်သည်။
Man Utd က ဘယ်သူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလဲ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ မာဆေးလ် ကွင်းလယ်လူ ဘူဘာကာ ကာမာရာ ကို ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာ ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ် (Daily Star, December 14) ။
ယူနိုက်တက်နည်းပြသစ် Ralf Rangnick သည် RB Leipzig ကွင်းလယ်လူ Amadou Haidara အား Old Trafford သို့ ခေါ်ယူရန် စိတ်အားထက်သန်နေပြီး Bundesliga အသင်းက ၎င်း၏ စာချုပ်ပါထွက်ခွာကြေးက အဓိက ကျလာမည်ဖြစ်သည်။ (Daily Mirror၊ ဒီဇင်ဘာ 10)၊ အကယ်၍ ယူနိုက်တက်သည် ၎င်း၏ပေါင် 32 သန်းတန်ကြေးကို ပေးချေ ခေါ်ယူလို ပါက ဟိုင်ဒါရာသည် လာမည့်လတွင် Ralf Rangnick ၏ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်လာလိမ့်မည် – (Sun၊ ဒီဇင်ဘာ 5)။Ralf Rangnick သည် ယူနိုက်တက်တွင် ၎င်း၏ကစားကွက်အသစ် High pressing ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ပေါင် 33 သန်းတန် ကွင်းလယ်ကစားသမား Amadou Haidara ကို ပစ်မှတ်ထားနေသည် (The Times၊ နိုဝင်ဘာ 30)။
ဖရန်ကီဒီဂျောင်၏ဖခင်ဖြစ်သူက “ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်ငါးခု” မှ ဘာစီလိုနာကစားသမားအား ခေါ်ယူရန် စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ယူနိုက်တက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်ဟူသော သတင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ (Daily Mirror)
နယူးကာဆယ်အသင်းမှ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး အော်စမန်ဒမ်ဘီလီကို ခေါ်ယူရန် မျှော်လင့်နေသော်လည်း ယူနိုက်တက်ကလည်း ဒမ်ဘီလီခေါ်ယူရေးလမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်ရောက်လာလို့ မျှော်လင့်ချက်နည်းပါးသွားပြီဖြစ်သည်။ (Daily Star, December 8) ဘာစီလိုနာအသင်းသည် ဇန်န၀ါရီလတွင် ပြည်ပကလပ်များနှင့် စကားပြောဆိုခွင့်ရှိသည့် ဒမ်ဘီလီအား စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် ရာဇသံထုတ်ပြန်ထားပြီး ကစားသမား ယူနိုက်တက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ချိတ်ဆက်မှုများ ရှိနေသည် (Mirror၊ ဒီဇင်ဘာ 3)။
အက်စတွန်ဗီလာ ကွင်းလယ်လူ John McGinn သည် ယူနိုက်တက်နည်းပြသစ် Ralf Rangnick လက်ထက်တွင် အသင်းရဲ့ အနာဂတ်သစ်အတွက် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် United ၏ ရေဒါတွင် ရှိနေသေးသည်။ (The Sun, December 1).
ယာယီနည်းပြ Ralf Rangnick သည် Erling Haaland အား ယူနိုက်တက်သို့ ခေါ်ယူရန် စည်းရုံးခဲ့လျှင် ကြီးမားသော အပိုဆုကြေး ပေါင် 8.5 သန်း ရရှိမည် (Daily Express, December 2); Rangnick သည် ၎င်း၏အသင်းအား ပိုမိုအားကောင်းရန်အတွက် ကစားသမားအသစ်ဖြည့်တင်းနိုင်ရန် ဇန်နဝါရီတွင် ပေါင်သန်း 100 အထိ ရရှိနိုင်သည် (Daily Mirror၊ ဒီဇင်ဘာ 2)။
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဖီလစ်ပီ ကော်တင်ဟိုကို အန်တိုနီမာရှယ်နဲ့ အီဒင်ဆန်ကာဗာနီတို့နဲ့ အလဲအထပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ယူနိုက်တက်ကို ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ (The Sun, December 1).Carney Chukwuemeka သည် ၎င်း၏အနာဂတ်အတွက်အက်စတွန်ဗီလာအသင်းရဲ့ စာချုပ်သစ်ကိုပယ်ချရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် လီဗာပူးလ်နှင့် ယူနိုက်တက်တို့သည် ၎င်းကိုခေါ်ယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည် (The Guardian၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်)။
Ref – Sky Sports
ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျအတှကျ ယူနိုကျတကျအသငျး၏ အပွောငျးအရှသေ့တငျးမြားနှငျ့ သတငျးထှကျနသေော ကစားသမားမြား
ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျသညျ စနနေေ့ ဇနျနဝါရီ 1 ရကျ၊ 2022 ခုနှဈတှငျ ဖှငျ့လှဈမညျဖွဈပွီး ဇနျနဝါရီ 31 ရကျ တနင်ျလာနေ့ 11 နာရီတှငျ ပိတျမညျဖွဈသညျ။
Man Utd က ဘယျသူတှနေဲ့ ခြိတျဆကျထားလဲ။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ မာဆေးလျ ကှငျးလယျလူ ဘူဘာကာ ကာမာရာ ကို ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှေ့ မှာ ချေါယူဖို့ စဉျးစားနတေယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါနပေါတယျ (Daily Star, December 14) ။
ယူနိုကျတကျနညျးပွသဈ Ralf Rangnick သညျ RB Leipzig ကှငျးလယျလူ Amadou Haidara အား Old Trafford သို့ ချေါယူရနျ စိတျအားထကျသနျနပွေီး Bundesliga အသငျးက ၎င်းငျး၏ စာခြုပျပါထှကျခှာကွေးက အဓိက ကလြာမညျဖွဈသညျ။ (Daily Mirror၊ ဒီဇငျဘာ 10)၊ အကယျ၍ ယူနိုကျတကျသညျ ၎င်းငျး၏ပေါငျ 32 သနျးတနျကွေးကို ပေးခြေ ချေျါယူလို ပါက ဟိုငျဒါရာသညျ လာမညျ့လတှငျ Ralf Rangnick ၏ပထမဆုံးချေါယူမှုဖွဈလာလိမျ့မညျ – (Sun၊ ဒီဇငျဘာ 5)။Ralf Rangnick သညျ ယူနိုကျတကျတှငျ ၎င်းငျး၏ကစားကှကျအသဈ High pressing ကို အကောငျအထညျဖျောရနျအတှကျ ပေါငျ 33 သနျးတနျ ကှငျးလယျကစားသမား Amadou Haidara ကို ပဈမှတျထားနသေညျ (The Times၊ နိုဝငျဘာ 30)။
ဖရနျကီဒီဂြောငျ၏ဖခငျဖွဈသူက “ဥရောပထိပျတနျးကလပျငါးခု” မှ ဘာစီလိုနာကစားသမားအား ချေါယူရနျ စုံစမျးမေးမွနျးခဲ့သျောလညျး ယူနိုကျတကျသို့ ပွောငျးရှနေို့ငျသညျဟူသော သတငျးကို ငွငျးပယျခဲ့သညျ။ (Daily Mirror)
နယူးကာဆယျအသငျးမှ ဘာစီလိုနာတိုကျစဈမှူး အျောစမနျဒမျဘီလီကို ချေါယူရနျ မြှျောလငျ့နသေျောလညျး ယူနိုကျတကျကလညျး ဒမျဘီလီချေါယူရေးလမျးကွောငျးထဲကို ဝငျရောကျလာလို့ မြှျောလငျ့ခကျြနညျးပါးသှားပွီဖွဈသညျ။ (Daily Star, December 8) ဘာစီလိုနာအသငျးသညျ ဇနျန၀ါရီလတှငျ ပွညျပကလပျမြားနှငျ့ စကားပွောဆိုခှငျ့ရှိသညျ့ ဒမျဘီလီအား စာခြုပျသကျတမျးတိုးရနျ ရာဇသံထုတျပွနျထားပွီး ကစားသမား ယူနိုကျတကျသို့ ပွောငျးရှရေ့နျ ခြိတျဆကျမှုမြား ရှိနသေညျ (Mirror၊ ဒီဇငျဘာ 3)။
အကျစတှနျဗီလာ ကှငျးလယျလူ John McGinn သညျ ယူနိုကျတကျနညျးပွသဈ Ralf Rangnick လကျထကျတှငျ အသငျးရဲ့ အနာဂတျသဈအတှကျ ပွငျဆငျနခြေိနျတှငျ United ၏ ရဒေါတှငျ ရှိနသေေးသညျ။ (The Sun, December 1).
ယာယီနညျးပွ Ralf Rangnick သညျ Erling Haaland အား ယူနိုကျတကျသို့ ချေါယူရနျ စညျးရုံးခဲ့လြှငျ ကွီးမားသော အပိုဆုကွေး ပေါငျ 8.5 သနျး ရရှိမညျ (Daily Express, December 2); Rangnick သညျ ၎င်းငျး၏အသငျးအား ပိုမိုအားကောငျးရနျအတှကျ ကစားသမားအသဈဖွညျ့တငျးနိုငျရနျ ဇနျနဝါရီတှငျ ပေါငျသနျး 100 အထိ ရရှိနိုငျသညျ (Daily Mirror၊ ဒီဇငျဘာ 2)။
ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ဖီလဈပီ ကျောတငျဟိုကို အနျတိုနီမာရှယျနဲ့ အီဒငျဆနျကာဗာနီတို့နဲ့ အလဲအထပျလုပျနိုငျဖို့ ယူနိုကျတကျကို ကမျးလှမျးထားတယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါနပေါတယျ။ (The Sun, December 1).
Carney Chukwuemeka သညျ ၎င်းငျး၏အနာဂတျအတှကျအကျစတှနျဗီလာအသငျးရဲ့ စာခြုပျသဈကိုပယျခရြနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ပွီးနောကျ လီဗာပူးလျနှငျ့ ယူနိုကျတကျတို့သညျ ၎င်းငျးကိုချေျါယူနိုငျရနျ ကွိုးပမျးနကွေသညျ (The Guardian၊ နိုဝငျဘာ ၂၇ ရကျ)။